ဟဲရင်းငါး - ဝီကီပီးဒီးယား
Early Eocene to Present.
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဟဲရင်းငါးသည်အရေးကြီးဆုံး ဟင်းလျာဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြ၏။ ထိုငါးမျိုးကို အမေရိကတိုက်ရှိ လူများထက် ဥရောပတိုက်ရှိလူများကပို၍ စားသောက်ကြသည်။ ဟဲရင်းငါးသည် သန်းပေါင်းများစွာ အုပ်စုဖွဲ့၍ နေထိုင်ကြသည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ မြောက်ဘက်ပိုင်းနှင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ မြောက်ဘက်ပိုင်း၌ သမပိုင်းနှင့် ပို၍အေးသောဒေသများတွင်ဟဲရင်းငါးများကို တွေ့ရလေသည်။ ဗြိတိသျှကျွန်းစု၏ အရှေ့ဘက်ရှိမြောက်ပင်လယ်မှလည်း ဟဲရင်းငါးအမြောက်အမြား ကိုရရှိလေသည်။
ဟဲရင်းငါး၏ပျမ်းမျှအလျားမှာ (၁၂")ဖြစ်သည်။ အကြေးခွံ ပါးပြီးလျှင် ကိုယ်အနေအထား အချိုးကျသည်။ ကိုယ်၏အပေါ်ပိုင်းအရောင်မှာ စိမ်းပြာရောင်မှအမည်းရောင်အထိဖြစ်ပြီးလျှင် ဘေးဘက်အရောင်မှာ ငွေရောင်ဖြင့်တောက်ပလျက်ရှိသည်။ အောက်ပိုင်းသည်ဆွတ် ဆွတ်ဖြူ၏။ မေးရိုးနှစ်ဖက်တွင် အလွန်သေးငယ်သော သွားကလေးများရှိသည်။ ဟဲရင်းငါးသည်ရေ သတ္တဝါငယ်ကလေးများကို စားသောက်လေသည်။ ခြောက်စတုရန်းမိုင်မှ နှစ်ဆယ်အထိ ကျယ်ဝန်းသောဧရိယာအတွင်း၌ သန်းပေါင်းများစွာသော ဟဲရင်းငါးတို့ ရေမျက်နှာပြင်အနီးတွင်ကူးလူးသွားလာကာနေထိုင်ကြလေသည်။
ဟဲရင်းငါးသည်တစ်ချိန်တွင်ရေနက်ရာ၌နေကြ၍ ရေတိမ်ရာကမ်းခြေဆီသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပြီးလျှင် ထိုနေရာများတွင် ဥများအုကြလေသည်။ ဟဲရင်းငါးများသည် အုလိုသောအခါယင်းတို့ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများသို့သာ သွား၍အုလေ့ရှိကြသည်။ ယင်းတို့သည် နွေကူးရာသီနှင့် ဆောင်းကူးရာသီများတွင် အုလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ဟဲရင်းငါးသည် အသက်ငါးနှစ်မပြည့်မချင်းဥ များကိုမအုနိုင်ကြချေ။ ဟဲရင်းငါးမသည်အရွယ်ကိုလိုက်၍အုပေါင်း ၂ဝဝဝဝမှ ၆ဝဝဝဝအထိအုတတ်လေသည်။ ထိုဥများသည်ရေ၏အောက်ခြေရှိ ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်မျိုးနှင့် ကျောက်များပေါ်တွင်တင်၍ ရှိကြလေသည်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ထိုဥများမှ ငါးကလေးများ ပေါက်လာကြလေသည်။
သို့သော်ဟဲရင်းငါး၌ ရန်သူမြောက်မြားစွာရှိသည်။ ထိုကြောင့်အုမြောက်မြားစွာကို အုချသော်လည်းအရွယ်ရောက်သော ဟဲရင်းငါးအဖြစ်သို့ အနည်းငယ်မျှသာ ရောက်နိုင်ကြလေသည်။ ကနန်းနှင့် ငါးများက ဥနှင်ငါးငယ်မြောက်မြားစွာကို စားပစ်ကြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး ဟဲရင်းငါးများကိုမူ ဝေလငါး၊ လင်းပိုင်၊ ပယ်လယ်ဖျံစသော ရေသတ္တဝါ ကြီးများကသာ စားကြသည်မဟုတ်၊ လင်းယုန်၊ စင်ယော်စသောပင်လယ်ငှက်များကလည်းစားပစ်ကြလေသည်။ တံငါသည်များသည်ပင်လယ်ငှက်များပျံဝဲလျက်ရှိသည့် နေရာတွင် ဟဲရင်းငါးအုပ်ကြီးများကို တွေ့မြင်နိုင်ကြလေသည်။ ထို့ပြင်ဟဲရင်းငါးများ ကူးသန်းသွားလာနေကြခြင်းဖြင့် ပင်လယ်တွင် အရောင်ထွက်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဟဲရင်းငါးအုပ်ကြီးများရှိကြောင်းကို သိနိုင်ကြလေသည်။ စစ်အတွင်း၌သင်္ဘောများတွင် ရေငုပ်သင်္ဘောများကို ရှာဖွေနိုင်သောကိရိယာများကဲ့သို့သောကိရိယာများကို တံငါလှေများတွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်လည်း ဟဲရင်းငါးအုပ်ကြီးများရှိမရှိကိုသိနိုင်ကြသေးသည်။
ဟဲရင်းငါးဖမ်းခြင်းသည် ဘေးအန္တရာယ်မကင်းချေ။ အထူးသဖြင့် လေအလွန်ထန်သော မြောက်ပင်လယ်တွင် ပို၍ဆိုးရွားလေသည်။ သို့သော်ထိုပင်လယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိကြသော အင်္ဂလန်၊ပြင်သစ်၊ ဆွီဒင်နှင့်နော်ဝေနိုင်ငံများမှ ဇွဲရှိကြသော တံငါသည်များသည် ယင်းတို့၏အသက် များကိုပမာမထားဘဲ နှစ်စဉ်ပင်ဟဲရင်းငါးများကိုဖမ်းယူကြလေသည်။ ဟဲရင်းငါးများကို များသောအားဖြင့်ပိုက်ကြီးများဖြင့် ဖမ်းယူလေ့ရှိကြသည်။ တံငါသည်များသည်ဟဲရင်းအမြောက်အမြားမြင်ရသော နေရာသို့သွားကြပြီးလျှင် ကြီးမားသည့်ပိုက်ကြီးများကိုချကြလေသည်။ ထိုနောက်တံငါသည်များသည် လှေငယ်များဖြင့် ပိုက်၏အစွန်းများတစ်လျှောက်တွင် လှော်ခတ်သွားကြကာ ငါးများကိုပိုက်၏ အလယ်ဗဟိုဘက်ဆီသို့သွားကြစေရန် ချောက်ပေးကြသည်။ ဟဲရင်းငါးများပိုက်၏ အလယ်ဗဟိုဘက်တွင်စုမိနိုင်သမျှစုမိပြီဟုယုံကြည်သောအခါတွင် လှေနှစ်စင်းသည် အချင်းချင်းကပ်မိအောင် လှော်ခတ်ကြပြီးလျှင် ပိုက်ကြီးကိုဆယ်ယူလိုက်သောအခါ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငါးများပိုက်အတွင်း၌ ပါလာသဖြင့် လှေများအတွင်းသို့ လောင်းထည့်နိုင်ကြလေသည်။ ဟဲရင်းငါးလုပ်ငန်းတွင် နော်ဝေနိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံများထက်သာလွန် လေသည်။ ဟဲရင်းငါးအချို့ကို အခြားငါးကြီးများဖမ်းရန် ငါးစာအဖြစ်အသုံးပြုကြ၍ အချို့ကိုမူမြေဩဇာ အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဟဲရင်းငါးမှ ထုတ်ယူသည့် ဆီကိုစက်များနှင့် အခြားကိစ္စများတွင်အသုံး ပြုကြလေသည်။ အချို့ဟဲရင်းငါးများကို ကျပ်တင်ပြီးလျှင် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချကြသည်။ ဟဲရင်းငါးအငယ်စားများကိုစည်သွတ်ပြီးလျှင် ဆာဒင်းငါးအဖြစ် နှင့်ရောင်းချကြသည်။ ဟဲရင်းငါးသည် ကလူပီးအီဒီးမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တွေ့ရသောဟဲရင်းငါးကိုပါဏဗေဒ အလိုအားဖြင့် ကလူပီးဟေရင်ဂပ် ဟုခေါ်၍ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် တွေ့ရသော ဟဲရင်းငါးကိုကလူပီး ပလက်ဆီအီးဟုခေါ်ကြသည်။
↑ Sepkoski, Jack (2002). "A compendium of fossil marine animal genera". Bulletins of American Paleontology 364: 560. Archived 23 July 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟဲရင်းငါး&oldid=726020" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။